दक्षिणसँग वार्ता गर्ने उत्तर कोरियाली किम योङ को हुन – Hotpati Media
दक्षिणसँग वार्ता गर्ने उत्तर कोरियाली किम योङ को हुन
२४ माघ २०७४, बुधबार ०४:५० मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
काठमाडौं – दक्षिण कोरियामा शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको ओलम्पिक खेलमा उत्तर कोरियाको टिम त सहभागी हुन्छ नै, त्यहाँ उत्तर कोरियाको ‘हेड अफ स्टेट’ अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष पनि पुग्नेछन् ।
उत्तर कोरियाको संसदका अध्यक्ष किम योङ नाम उत्तर कोरियाबाट दक्षिण कोरिया जाने सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुनेछन् । नेता किम ओलम्पिक उदघाटन समारोहमा पनि सहभागी हुने उत्तर कोरियाले पुष्टि गरेको छ ।
शुक्रबार हुने उदघाटन समारोहमा उत्तर र दक्षिण कोरिया दुवै देशका खेलाडीहरुले एउटै झण्डामुनि मार्चपास गर्नेछन् ।केही व्यक्तिले यसलाई दुबै देशको सम्वन्धमा आइसब्रेक हुने संकेतको रुपमा लिएका छन् । तर जानकारहरु भने उत्तर कोरियाको परमाणु महात्वाकांक्षामा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । २२ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै दक्षिण कोरिया जान लागेका किमले त्यहाँ तीन दिन बिताउनेछन् ।
को हुन् किम योङ नाम ?
९० वर्षीय किम योङ नाम उत्तर कोरियाका शासकका तीन पीँढि देखिसकेका छन् । आधिकारिक रुपमा किम उत्तर कोरियाका राष्ट्राध्यक्ष हुन् जो आफ्नो देशमा आउने विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई मान्यता दिन्छन् ।
विदेशी नेताहरुलाई बधाई या सान्त्वना सन्देश पठाउने उनको जिम्मेवारी हो । उनी १९९८ देखि उत्तर कोरियाको रबर–स्ट्याम्प संसद ‘सुप्रीम पिपुल्स एसेम्बली’को प्रमुख पनि छन् ।
उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूला नेता किम जोङ्ग कतै नगए पनि किम योङ नामले भने कयौंपटक औपचारिक विदेश भ्रमण गरेका छन् । अगस्ट २०१७ मा किम योङ नाम इरान गएका थिए जहाँ उनले राष्ट्रपति हसन रुहानीको दोस्रो कार्यकाल उदघाटन समारोहमा सहभागीता जनाएका थिए ।
वफादार नेता मानिन्छन् किम
किम २०१४ मा रुसको सोचीमा भएको विन्टर ओलम्पिक उदघाटन समारोहमा पनि सहभागी भएका थिए । किमलाई उत्तर कोरियाको शासनप्रति वफादार नेताको रुपमा चिनिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको समाचार एजेन्सी योनहापले उत्तर कोरियाबाट आएका एक व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘किम कहिल्यै कुनै गल्ती गर्दैनन् किनकी उनी देशको नेतृत्व सम्हाल्ने नेताको इशारामा काम र कुरा गर्दछन् । यसैकारण उनले उत्तर कोरिया जस्तो देशमा आजसम्म आफ्नो पद कायमै राखेका छन् ।’
दक्षिण कोरियाका एक अधिकारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बीबीसीलाई भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ किम यहाँ आउनुले यो संकेत दिन्छ कि उत्तर कोरिया दुबै देशबीच सम्वन्ध सुधार्न चाहन्छ र यसका लागि गम्भीर पनि छ ।’समाचार एजेन्सी योनहापका अनुसार सियोलले उत्तर कोरियाको टोलीसँग उच्चस्तरीय वार्ताको माग पनि राख्नेछ ।
ओलम्पिक उदघाटन समारोहमा किमको वार्ता अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग पनि हुनेछ जुन दुवै देशबीच जारी तनावलाई नजिकबाट बुझ्ने एक मौका हुनसक्छ ।
वाशिङ्गटन पोस्टको रिपोर्टमा भनिएको छ, ओट्टो वार्मवेयरका बुवा फ्रेड वार्मबेयर पनि उदघाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् । उत्तर कोरियाको जेलमा थुनिएका ओट्टोको अमेरिका फर्किएको केही दिनपछि निधन भएको थियो ।
फ्रेड वार्मबेयर र उनकी पत्नी सिन्डी हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘स्टेट अफ द युनियन भाषण’मा पनि सहभागी भएका थिए ।
कुन खेलमा भाग लिन्छ उत्तर कोरियाले ?
आइतबार दुबै कोरियाली देशको साझा टिमले स्वीडेनविरुद्ध आइस हकीमा पहिलो अभ्यास म्याच खेलेको थियो । तर कोरियाली टिम १–३ ले पराजित भयो ।
आइस हकीसहित उत्तर कोरियाका खेलाडीले स्किङ र फिङ्गर स्केटिङमा पनि भाग लिनेछन् । उत्तर कोरियाले सयौं प्रतिनिधि, चियर्सलिडर र कलाकारहरुलाई पनि विन्टर ओलम्पिकका लागि दक्षिण कोरिया पठाएको छ ।
सोमबार उत्तर कोरियाले आफ्नो एक टोलीलाई फेरी (ठूलो डुंगा)मार्फत् पठाउने प्रस्ताव राख्यो । जसका लागि दुबै देशबीच दुईतर्फी पावन्दी हटाउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१० पछि उत्तर कोरियाली जहाज दक्षिण कोरिया प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।दक्षिण कोरियाका एक प्रवक्ताले भनेका छन्– उत्तरले ओलम्पिक खेलको सफल आयोजनाका लागि छुट दिनका लागि माग गरेको छ ।
कहाँ अडिएको छ दुवै कोरियाली देशको सम्वन्ध ?
उत्तर कोरिया आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र मिसाइल परीक्षणलाई लिएर निकै अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा छ ।त्यसैले सबैलाई चिन्ता भयो जब किम जोङ्ग उनले आफ्नो नयाँ वर्षको भाषणमा दक्षिण कोरियासँग सम्वन्ध सुधार्ने कुरा गरे ।
त्यसपछि उत्तर कोरियाले फेब्रुअरी ९ देखि २५ तारिकसम्म दक्षिण कोरियामा हुन लागेको विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी हुने घोषणा ग¥यो यसलाई कसैले नयाँ सुरुआतको संकेतको रुपमा बुझे । तर उत्तर कोरियाले यसलाई लिएर कुनै पनि धारणा बनाउनु हतार हुने स्पष्ट पा¥यो ।
यसै हप्ता सार्वजनिक समाचारअनुसार ओलम्पिक खेल सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि ८ फेब्रुअरीमा उत्तर कोरियाले ठूलो सैन्य परेड आयोजना गर्दैछ । यो समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पायो । आलोचनामा घेरिएको उत्तर कोरियाले जवाफ दियो, ‘कसैलाई कसैको योजनालाई मसला बनाउने हक छैन ।’
यसलगत्तै उत्तर कोरियाले छिमेकी कोरियाली देशसँग हुने एक साँस्कृतिक कार्यक्रम पनि रद्द गरेको थियो । यस्तै सियोल र वाशिङ्गटनले हरेक वर्ष हुने साझा सैन्य अभ्यास केही समयका लागि स्थगित गरे । उत्तर कोरियाले यस अभ्यासलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।